E wezụga na nchịkọta, olee otu ị ga-esi mara ma ị meela nke a? Otu ụzọ bụ naanị ịlele isi mmalite nke ibe gị ma chọọ ga.js. Ọbụna ma ọ bụrụ na ịchọrọ nyochaa saịtị ahụ otutu akaụntụ Google Analytics, enwere otu edemede.
Nchịkọta Google na-arụ ọrụ site na itinye edemede nke na-achịkọta ozi niile, chekwaa ozi ahụ na kuki ihe nchọgharị ma zipụ ya na sava Google site na ihe oyiyi arịrịọ. Mgbe edere ederede karịa otu oge, mgbe ụfọdụ ọ na-edegharị kuki, wee zigara ọtụtụ ihe oyiyi na sava. Ọ bụ ya mere ụba ọnụego dị oke ala… ọ bụrụ na ị gaa karịa otu peeji na saịtị, ị adịghị ibiaghachi. Ya mere,… ma ọ bụrụ na n'ihendesịta na-firing ihe karịrị otu ugboro mgbe ị gara otu na peeji nke, ọ pụtara na ị gara otutu peeji nke.
Lelee peeji gị na nke gị nchịkọta iji jide n'aka na nke gi nchịkọta edemede arụnyere na saịtị gị nke ọma, ma gbaa mbọ hụ na ijighi edemede edemede karịa karịa otu ugboro. Ọ bụrụ na ịmee, data gị ezighi ezi.